Insetcide | SHWE THIT OO
Warning: Undefined variable $post in /home/shwethitoomm/public_html/wp-content/themes/shwethitoo/functions.php on line 277
ပင်လုံးပျံ့ပိုးသတ်ဆေး Active Ingredient: Thiamethoxam …….. 14.15%SC Lambda-Cyhalothrin ………. 10.6%SC ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၁၀-၂၀)စီစီ တိသေ/စားသေ အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေး (၁)မျိုးနှင့် ပင်လုံးပျံ့ အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေး (၁)မျိုးတို့
ထိသေ၊ စားသေ၊ ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးခဲ Active Ingredient: Cartap Hydrochloride …….. 4%G ဆစ်ပိုးများအတွက် အကောင်းဆုံးပိုးသတ်ဆေးခဲဖြစ်သည်။ စပါးစစ်ပိုး၊ ဖြုတ်ပိုးများ၊ ကျန်စစ်ပိုးများနှင့် အခြားသီးနှံများတွင် လျင်စွာကျရောက်တက်သည့် ပျ၊ လှေးပိုးနှင့် ရွက်ထွင်းပိုးတို့ကို စွမ်းအားမြှင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သည့်
မှိုသတ်ဆေး မွှားပင့်ကူနီ သတ်ဆေး Active Ingredient: Sulphur ………. 80%DF ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၄၀)ဂရမ် သီးနှံဖျက်မှိုရောဂါများနှင့် မွှားပင့်ကူနီတို့ကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သည့် အစွမ်းထက်မှိုသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ကန့်ဓာတ်ပါဝင်သဖြင့် အပင်အစာချက်လုပ်အားကောင်း၍ အပင်ကြီးထွားမှုကို အားပေးပြီး၊ သီးနှံအရေအသွေးနှင့်
ထိသေ၊ စားသေနှင့် ပင်လုံးပျံ့ပိုးသတ်ဆေး Active Ingredient: Cartap Hydrochloride ……….. 95%WP ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၄၀)ဂရမ် ထိသေ၊ စားသေနှင့် ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပြီး အင်းဆက်များကို အစာမစားချင်အောင်ဖြစ်၍ သေဆုံးစေသည့်
ထိသေစားသေနှင့် ဖျက်ပိုးဥသတ်ပိုးသတ်ဆေး Active Ingredient: Cypermethrin …… 4%EC Profenofos …… 40%EC ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၃၀-၄၀)စီစီ အော်ဂင်နိုဖော့စဖိတ်အုပ်စုနှင့် ပိုင်ရီသရွိက်အုပ်စု ဆေး(၂)မျိုးပေါင်းစပ်ထားသော အစွမ်းထက်ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ထိသေစားသေအာနိသင်ရှိ အပင်အတွင်း ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့အား
ထိသေစားသေ အဆိပ်ငွေ့အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေး Active Ingredient: Dichlorvos ……… 25%EC Chloripyrifos ……… 10%EC ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၃၀-၄၀)စီစီ အော်ဂင်နိုဖော့စ်စဖိတ်အုပ်စုဝင် အဆိပ်ငွေ့အာနိသင်ရှိသော ပိုးသတ်ဆေး (၂)မျိုး ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဖျက်ပိုးများ၏ အာရုံကြောနှင့်